Malunga nathi - Guangzhou Zeno Electronics Co., Ltd.
I-Guangzhou Zeno Electronics Co, Ltd.
Singoishishini eligxile kwi-R & D, kwimveliso nakwintengiso yezixhobo ezibonakalayo zembonakalo yomda. Siqulathe i-R & D, itekhnoloji, imveliso, umgangatho, ukuthengisa, inkonzo yasemva kwentengiso kunye namanye amasebe anamakhulu abasebenzi. Sibe ngumenzi wobuchwephesha kwishishini elibonwa ngokubonakalayo kwishishini elisebenza ngezixhobo kwiminyaka emininzi ekhutheleyo, abasebenzi abagqwesileyo kunye notyalo mali kwizixhobo zemveliso ezihambele phambili, Ukunikezela ngexabiso elikhuphisanayo kusetyenziswa iindlela ezintsha kunye neetekhnoloji ezidityaniswe nemveliso ekumgangatho ophezulu, sikwazile ukulawula lonke ikhonkco lobuchwephesha: ukuqala ekuveliseni owethu umgca weemveliso. Zonke iimveliso zethu zidlula kuvavanyo olungqongqo kunye nezigaba zophuhliso lweemveliso, ngaphambi kokuba zithengiswe. nokugcina imigangatho ephezulu yemveliso kunye nendawo yokusebenza. Ingxelo yabathengi kwiimveliso zondliwa ngokuthe ngqo kuthi kuphuculo lweemveliso ezizayo.
EyethuEzona mveliso ziphambili zizibiyeli zeTV, izibiyeli zeprojekti, izibiyeli zedesktop, inkomfa yevidiyo iinqwelo ezihambayo, izisombululo zeofisi zeergo. kunye nezinye izixhobo ezinxulumene noko. Uhlobo lwethu sele luphawu oludumileyo kushishino. Ngokweentengiso, ngaphakathi zinokwahlulwa zibe yintengiso yasekhaya kunye nokuthumela ngaphandle.
Eyamuyilo lweqela, ukupakisha kwabathengi okwenziweyo, ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ukufumana iimfuno zabathengi, bekusenziwa kwaye kusasazwa izisombululo ezikumgangatho ophezulu zeTV. Le ndlela ishenxisa umntu ophakathi okanye iindleko zeshishini eliphakathi, esivumela ukuba sidlulisele ulondolozo kubathengi bethu. Kwaye sikwathengisa kubathengisi abakhulu abakwi-Intanethi abanjengoAmazon kunye neWalmart.
Sifuna ukonwabela izixhobo zakho ezintsha ngokukhawuleza ngaphandle kweendleko ezininzi, kunye nenye indlela yokuthi, "Enkosi!". Siyayibulela inkxaso yakho eqhubekayo, kwaye sizakuqhubeka sizama iindlela zokudlulisa ukonga okongeziweyo kwiindwendwe zethu ezixabisekileyo. Sazise ukuba izixhobo zakho ezitsha zikusebenzela njani!
Sinezinto ezininzi zeearhente zephondo kunye nabasasazi kulo lonke elaseTshayina, ke ijelo lokusasaza elomeleleyo nelizinzileyo lasekwa.
Siyaqonda ukugubungela ngokupheleleyo uthungelwano olukwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi ngokuxhomekeka kwiqonga elinamandla le-Intanethi e-commerce apho sisebenzisana khona neenkampani ezaziwayo zorhwebo zasekhaya ezinje ngeJD.com, Tmall, Taobao, Suning kunye nePinduodu